Jaakadaha Shiinaha ee diirimaadka jaakadaha Fleece waxay taageeraan iibsiga warshadaha iyo warshadaha waxsoosaarka | Ruisheng
Jaakadani Fleece jackets-ku waxay ku habboon tahay inay kululeyso markay hawadu qabow tahay. Cimilada qaboobaha, waad xiran kartaa jaakad kale si ay kuugululeyso. Waxaan ku siin doonaa qiimaha ugu wanaagsan ee tiro aad u badan oo soo iibsasho ah
Cabbirka S / M / L / XL / XXL Cabbir kasta waa la heli karaa
Waxyaabaha Polyester / cudud 160-180gsm
Nooca Xiritaanka Digsi
1.Aad aad u waara
2.Super dhogor jilicsan
3.Ka raac cabirka caadada, astaanta gaarka ah, astaanta iyo xirmada!
Alaab aad u fiican (naqshad gaar ah, mashiinka daabacaadda ee horay loo sii wado, xakamaynta tayada adag) Warshadda iibka tooska ah (qiimaha wanaagsan iyo tartanka) Adeeg weyn (OEM, ODM, adeegyada iibka kadib, bixinta degdega ah) Xirfadle.
Hore: Iibinta kulul, Ragga dhogorta goobeedka ah ayaa loo habeyn karaa diirimaadka iyo raaxada
Xiga: Xirfadleyda muruqmaalaha dharka oo waara oo si fudud loo nadiifiyo